Qof Falastiini ah oo ku dhaawacmay iska hor imaad ay la galeen ciidamada Israa’iil xadka Gaza – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Qof Falastiini ah oo ku dhaawacmay iska hor imaad ay la galeen...
MAGAALADA GAZA, Dhulka Falastiin: Qof Falastiini ah ayaa u dhintey dhaawacyo soo gaaray intii ay socdeen iska hor imaadyo ay la galeen ciidamada Israa’iil xadka Gaza, wasaaradda caafimaadka ee dhulka ayaa sheegtay, ka hor mudaaharaadyo cusub oo lagu baaqay Arbacada.
Ka dib qalalaasihii Sabtidii-oo ay ku dhaawacmeen tobanaan qof isla markaana ku reebay sarkaal booliis Israa’iil ah xaalad halis ah-Osama Khaled Deaih oo Falastiini ah oo 32 jir ahaa ayaa dhintay ka dib markii ay toogteen ciidamada Israa’iil, sida ay sheegtay wasaaraddu.
Ciidanka Israa’iil ayaa sheegay inay ku jawaabeen dab nool iyo tallaabooyin kale oo ay u qaadeen “rabshado” reer Falastiin ah oo waxyaabaha qarxa ku tuurayay xayndaabka xadka oo isku dayay inay sare u qaadaan.
Mas’uuliyiinta Islaamiyiinta ee Xamaas ayaa sheegay in dadka dhaawacmay uu ka mid yahay wiil 13 jir ah oo madaxa laga toogtay oo looga tagay xaalad halis ah.
Dhinacyada Falastiin ee ku jira dhulka ay Israel go’doomiyeen ayaa ku baaqay mudaaharaad cusub oo dhici doona 5:00 galabnimo. Arbacadii xadka u dhow koonfurta Gaza ee Khan Yunis.
Ciidanka Israa’iil ayaa sheegay inay xoojinayaan qaybtooda Gaza goor dambe oo Sabtidii ah, maaddaama ay duqayn cirka ah ku dhufteen bartilmaameedyo badan oo Xamaas leedahay.
Israa’iil ayaa mar kale garaacday Qaza habeenimadii Isniinta-Talaadada iyada oo ka jawaabeysa furayaasha biibiilaha dabka dhaliya ee dabka badan ka dhaliya koonfurta Eskhol ee Israa’iil.
Lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay weeraradii ugu dambeeyay ee Israel.
Mudaaharaadyadan ayaa imanaya saddex bilood ka dib markii xabbad -joojin aan rasmi ahayn la soo afjaray 11 maalmood oo colaad u dhexaysay Xamaas iyo Israa’iil, waana dagaalkii ugu xumaa ee labada dhinac dhexmara muddo sannado ah.
Maamulka Xamaas ayaa sheegay in 260 Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen duqeymaha cirka ee Israa’iil intii uu socday iskahorimaadka, oo ay ku jiraan dagaalyahanno.
Kooxaha Falastiiniyiinta ayaa kumanaan gantaal ku weeraray Israa’iil intii uu dagaalku socday, waxaana ku dhintay 13 qof oo uu ku jiro askari, sida ay sheegeen milatariga iyo booliska.
Sannadkii 2018 -kii, reer Gaasa waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq mudaaharaad oo ay ku dalbanayaan in la joojiyo go’doominta Israa’iil iyo xaqa ay Falastiiniyiintu ugu noqon karaan dhulalkii ay ka qaxeen ama laga saaray markii la aasaasay dawladda Yuhuudda.
Mudaaharaadyada toddobaadlaha ah ee ay taageerto Xamaas, oo inta badan rabshado wata, ayaa ka dhashay markii Israa’iil ay Gaza ku dishay ilaa 350 qof oo Falastiiniyiin ah muddo sannad ka badan.
Previous articleMareykanka iyo Midowga Yurub waxay ka digayaan in ciidamada Eritrea oo cusub la geeyo gobalka Tigray -ga ee Itoobiya
Next articleWar cusub oo ka soo baxay Itoobiya oo ku saabsan biyo -xireenka Renaissance iyo biyaha wabiga Niil
MW Farmajo iyo Uhuru oo isku arki doona Addis Ababa, Maxay...